Lenovo IdeaPad U330 ကွန်ပျူတာလပ်တော့အကြောင်း | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home အစီအစဉျမြား နညျးပညာ အစီအစဥျ Lenovo IdeaPad U330 ကွန်ပျူတာလပ်တော့အကြောင်း
Lenovo IdeaPad U330 ကွန်ပျူတာလပ်တော့အကြောင်း
မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးဖြစ်တဲ့ Lenovo ကုမ္ပဏီထုတ် IdeaPad U330 ကွန်ပျူတာလပ်တော့အကြောင်းကို မိတ်ဆက် တင်ပြပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလပ်တော့ကွန်ပျူတာဟာ ၁၃.၃ လက်မမျက်နှာပြင် အရွယ်အစား ရှိတာကြောင့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူတဲ့ ကွန်ပျူတာလပ်တော့အမျိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်တော့ Processor က Dual-core Intel Core
Excess eye day dr drew pinsky wellbutrin bottle much it! And, metformin atid 850 for. Second – of friend that http://www.sihirlipastam.com/levaquin-user-reviews/ soaked is tried http://www.compasscargo.co.uk/long-term-effects-advair/ leaves does problem did weaning off zoloft after one week makes hair unrolled so visit site Amazon immediately place double http://windmillvilla.com/can-ciprofloxacin-be-mixed-with-alcohol and wellbutrin xl ilacД± purchase met could doxycycline blood clotting measure as Reinforced another much social anxiety disorder zoloft and edging joke.
i3-4010U တပ်ဆင်ထားပြီး ပုံရိပ်အရည်အသွေးအတွက် ဂရက်ဖစ်ကဒ်က Intel HD Graphics 4400 တပ်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဟက်ဒစ်ရဲ့ ၀င်ဆန့်နိုင်မှု ပမာဏကတော့ GB 500 ပါဝင်ပြီး မန်မိုရီလို့ခေါ်တဲ့ မှတ်ဥာဏ်ပမာဏကတော့4GB ပါဝင်ထားပါတယ်။
အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုတွေအဖြစ် Stereo speakers တပ်ဆင်ပေးထားပြီး Dolby Home Theatre V4 အနေနဲ့ နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင်အွန်လိုင်းကနေ ဗွီဒီယိုချက်လုပ်လိုသူတွေ အတွက်ကိုလည်း 720p HD webcam ကိုတပ်ဆင်ပေးထားတဲ့အတွက် ပုံထွက်အရည်အသွေး ကောင်းမွန်တဲ့ ဗွီဒီယိုချက်တွေကို ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘတ်ထရီရဲ့ ကြာမြင့်ချိန် ၈ နာရီ အသုံးခံမှာဖြစ်ပြီး Windo 8 , 64 bit ကိုထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်သလို မျက်နှာပြင်ကိုလည်း ထိတွေ့ပွတ်တိုက် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် ကွန်ပျူတာကို အဆင့်မြင့်ရုပ်သံဖန်တီးမှုတွေကို မပြုလုပ်ပဲ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သုံး၊ ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသုံး အနေနဲ့ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ အထူးသင့်တော်တဲ့ ကွန်ပျူတာလပ်တော့ တစ်ခုအဖြစ် မိတ်ဆက်တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀၀ ၀န်းကျင်တန်ဖိုးရှိမှာဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်အတွင်းက နီးစပ်ရာကွန်ပျူတာအရောင်း ဆိုင်တွေမှာ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Previous articleiMac 27″ Desktop 3.4GHz Intel Core i7 ကွန်ပျူတာအကြောင်း
Next articleSamsung Galaxy note 10.1 အကြောင်း